एमाले एकता: टालाटुली बटुली कति राम्री पुतली « Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : १५ श्रावण २०७८, शुक्रबार १५:५३
संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक द्वन्द बिस्तारै समाधान हुन सक्ने सम्भावना देखिएपनि त्यो समाधान कति बलियो होला भन्ने आकंलन गर्न थालिएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र पार्टीका नेता माधव नेपाल बीचको विवादले गर्दा नेकपा एमाले नै विभाजनको संघारमा पुगेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष र नेता नेपाल बीच एकले अर्कोलाई विश्वास गर्न नसकिरहेको अवस्थामा पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरुले पार्टी एकतालाई बचाउन हर प्रयास गरिरहेका भएपनि त्यस्तो प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन । पार्टी अध्यक्ष र नेता नेपाल बीचको सहमति अनुसार गठन गरिएको कार्यदलले १० बुँदे सहमति तयार गरेर दुवै नेतालाई बुझाई सकेको भएपनि त्यस्तो सहमति पत्रलाई माधव नेपालले स्वीकार गर्न नसकेको हुनाले विवाद जहाँको त्यही रहेको हाे ।
नेकपा एमालेमा फेरी बराबरी अधिकारसहितका दुई अध्यक्ष बनाएर विवाद टुग्याउने कोसिस भईरहेको छ । पार्टीको महाधिवेशनले निर्वाचित गरेका अध्यक्षले आफ्नैसँग चुनावमा पराजित भएका व्यक्तिलाई बराबरीको अधिकारसहितको अध्यक्ष बनाउन राजी होलान् त भन्ने प्रश्न समेत उव्जिएको छ । पार्टीमा दुई अध्यक्ष बनाउनु भनेको खुकुरीको दापमा दुईवटा खुकुरी राख्नु खोज्नु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन् । पार्टी अध्यक्ष र नेता नेपालबीचको सम्वन्धमा सुधार नआएसम्म दुई अध्यक्ष बनाएपनि विवाद समाधान हुन सक्दैन ।
२०७५ साल जेष्ठ ३ गते तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुँदा दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको हुनाले नेकपा भित्रै विवाद उत्पन्न भएको थियो । दुई अध्यक्षको मत बाझिएको अवस्थामा कसरी समस्या समाधान हुने ? किनकी पार्टी अध्यक्ष ओली र माधव नेपालबीचमा लामो समयदेखि सम्वन्ध विग्रिएको छ । सम्वन्ध विग्रनुको कारण व्यक्तिगत स्वार्थ नै हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्दकै कारण २०७७ साल पुष ५ गते र २०७८ साल जेष्ठ ८ गते गरी दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न बाध्य भए ।
माधव नेपालले नै त्यस्तो व्यहार संसदीय समितिकाे वैठकमै देखाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको विघटन ठिक थियो भन्न किन नपाइने ? प्रतिनिधिसभाको विघटनको पुनस्थापना हुनु पर्दछ भनेर सडकमै उर्फिन पाइने तर हुनु हुँदैन ताजा जनादेश मै जानु पर्दछ भन्न नपाइने ? यो कस्तो विधि, विधान र पद्धति हो ।
आफ्नै पार्टी अध्यक्षले विघटन गरेको प्रतिनिधसभालाई पुनस्थापना गर्न माधव नेपालसहितका नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लागि परे । पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएपनि संसदले सन्तोषजनक रुपमा काम गर्न सकेन । पार्टी भित्रको आन्तरिक विवाद समाधान हुन सकेन । त्यही कारणले गर्दा २०७८ साल जेष्ठ ८ गते पुन प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनका लागि माधव नेपालसहितका अन्य नेताहरु सडक आन्दोलनमै गएर आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एव प्रधानमन्त्री विरुद्व सर्वोच्च अदालतमा पुगे । पार्टीको निर्देशन उल्लघन गरी तत्कालीन प्रमुख विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर नै गरे ? यी सबै कारणहरुले गर्दा नेकपा एमाले भित्र फेरी अर्को विवाद आउँदैन भने ग्यारेन्टी के ?
नेकपा एमालेको विधानमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था नरहेकोले दुई अध्यक्षको विधानमै त्यस्तो व्यवस्था गर्न पार्टी अध्यक्ष ओली नै सहमत हुन पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नयाँ व्यवस्थामा जान विधान नै संशोधन गर्न पर्ने हुन्छ । पार्टी अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाललाई पार्टीको दोस्रो अध्यक्ष बनाउने सहमति जनाई सकेकाे भएपनि समान अधिकारसहितको अध्यक्ष बनाउन ओली अहिले कै अवस्थामा सहमत होलान् त ?
माधव नेपाल पक्षको वैठकले पार्टी अध्यक्ष ओली पक्षले ल्याएको प्रस्ताव स्वीकार गर्नु पर्ने आवाज उठाईरहेका छन् । माधव नेपाल पक्षले सम्मानजनक एकता खोजेको छ । तर कस्तो सम्मानजनक भनेको हो ? त्यो प्रष्रट भएको छैन । १० वुँदे सहमतिलाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको वैठकले स्वीकार गरी त्यसलाई कार्यान्यनमा लैजाने निणर्य समेत गरी सकेको भएपनि माधव नेपाल समुहले त्यसलाई अपूर्ण भनिरहेको छ ।
पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द सडकमै छताछुल्ल हुन थालेपछि र एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको हुुनाले नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरु समेत आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । अरु त अरु माधव नेपालले नै त्यस्तो व्यहार संसदीय समितिकाे वैठकमै देखाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको विघटन ठिक थियो भन्न किन नपाइने ? प्रतिनिधिसभाको विघटनको पुनस्थापना हुनु पर्दछ भनेर सडकमै उर्फिन पाइने तर हुनु हुँदैन ताजा जनादेश मै जानु पर्दछ भन्न नपाइने ? यो कस्तो विधि, विधान र पद्धति हो ।
माधव नेपालले जहिले पनि विधि विधान र पद्वती कै कुरा उठाउँदै आएका छन् तर तिनै माधव नेपालले संसदीय समितिमा बाेलेका सांसदलाई वैठक कक्षबाट वाहिर जाऊ राजीनामा देउ भन्नु कति उचित र न्याय संगत हुन्छ ? संसदीय समितिका सभापतिले रुलिङ गर्ने कि सांसदले ? संसदयी समितिको वैठकमा उपस्थिति भएका सबै सांसदहरुको हैसियत एकै होइन र ? कि पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियत बढी हुन्छ ।
नेकपा एमालेमा सिद्धान्तमा एकमत रहेको छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मात्र फरक मत रहेको छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पार्टी अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल बीचमा फरक फरक मत भएकाले गर्दा पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन पनि त्यही फरक मतले गर्दा कठिनाई उत्पन्न भएको छ ।
माधव नेपााल पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर पार्टी अध्यक्ष एंव तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको खिल्ली उडाएको आरोप माधव पक्षले लगाउँदै आएको छ भन्ने ओली पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेश लिन खोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास नै भएको भन्दै अदालतले विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनस्थापना गरेर राजनीतिक मुद्वालाई मात्र होइन अरु धेरै मुद्वाका विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत ओली नेपाल बीचमा फरक फरक मत रहेको देखिन्छ । एउटै मुद्वामा फरक -फरक मत राख्दै ओली नेपाल बीच शृंखलाबद्व शीतयुद्व जारी रहेको छ ।
अर्को महाधिवेशन समेत नभएको अवस्थामा बीचमै पदबाट हटाउन खोज्नु विधि विधान र पद्धतिकै ठाडो उपहास मात्र होइन कार्यकर्ताहरुले दिएको मतको समेत अपमान हो । अरुलाई विधि विधान र पद्धतिको पाठ पढाउने व्यत्तिले यदि विधि विधान र पद्धतिमा बस्नु पर्ने कि नपर्ने ?
ओली नेपाल बीच राजनीतिक मुद्वामा फरक फरक मत रहेकै बेला दोस्रो तहका नेताहरुले विभिन्न विकल्पसहित पार्टी एकताको प्रयास जारी राखेका छन् । तर राजनीतिक मुद्वामा फरक -फरक दृष्टिकोण रहेकै कारण केही महिनादेखि थालिएको पार्टीको एकताको प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन । पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्दले गर्दा सिंगो नेकपा एमाले संकटमुक्त भईहाल्न सक्ने सम्भावना तत्तकाल देखिएको छैन । विभिन्न तहबाट पार्टी एकताको प्रयास भएपनि पार्टी अध्यक्ष र नेता नेपाल बीचमा भेटवार्ता नै नभएकोले गर्दा एकताले सार्थकता पाउन सकेको देखिदैन । दुवै नेतालाई आ –आफ्ना पक्षका नेताहरुले पार्टी एकताको लागि वार्तामा वस्न आग्रह गरिरहेका भए उनीहरुको वार्तामा वस्न नस्कनु भनेको उनीहरुको एक अर्काप्रतिको दम्भ नै हो ।
पार्टी विभाजन हुनका लागि सैद्धान्तिक मत चाहिन्छ तर हाम्रा राजनीतिक दलहरु प्राय सबै विभाजित हुँदै पुनः एक हुँदै आएका छन् । त्यस्को एउटै कारण हो, व्यक्तिगत स्वार्थ र व्यक्तिगत टकराव हो । अहिले नेकपा एमालेमा देखिएको विवाद पनि व्यक्तिगत कारण टकराव नै हो । माधव नेपालले आफुलाई पराजित गरी पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका केपी ओलीलाई कहिल्यै पनि अध्यक्ष स्वीकार गर्न सकेको व्यवहारिक रुपमा देखिएन ।
पार्टीको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका व्यक्तिलाई पदावधि नसकिएको र अर्को महाधिवेशन समेत नभएको अवस्थामा बीचमै पदबाट हटाउन खोज्नु विधि विधान र पद्धतिकै ठाडो उपहास मात्र होइन कार्यकर्ताहरुले दिएको मतको समेत अपमान हो । अरुलाई विधि विधान र पद्धतिको पाठ पढाउने व्यत्तिले यदि विधि विधान र पद्धतिमा बस्नु पर्ने कि नपर्ने ? एउटै पार्टीमा बसिसकेपछि बहुमतले गरेको निणर्य आफुलाई चित्त नवुझेपनि स्वीकार गर्न सक्नु नै लोकतान्त्रिक अभ्यास र पद्धति हो । महाधिवेशनबाट कार्यकर्ताहरुको मत जितेर अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुपर्दछ । अहिले नेकपा एमालेमा प्रविधिक एकता गराउन खोजिएको जस्तो देखिएको छ ।
प्राविधिक एकताको कुनै अर्थ रहँदैन । प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई कसैले प्रतिगामी कदम भन्ने कसैले अग्रगामी कदम भनेर वकालत गरिरहनु आवश्यकता देखिदैन । अब नेकपा एमालेको एकता हुँदा दुई व्यक्तिको व्यवस्थापन र केही वुँदामा दुई व्यक्तिले सहमति गरेमात्र नेकपा एमालेको एकता हुन सक्दैन् । अहिले देखिएका तमाम मुद्वाहरुमा प्याकेजमै सहमति भएमा मात्र त्यो सहमतिको अर्थ हुन सक्छ । माधव पक्षले पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई कम्युनिष्ठ पार्टी जोगाउन नसकेको प्रतिनिधिसभाको दुई दुई पटक विघटन गरेको विषयमा आलोचना गर्नु पर्ने कुरा उठाईरहेकोले गर्दा एकतालाई जटिल अवस्थामा पुर्याएको छ ।
माधव नेपाल पक्षले आफ्नै पहलमा प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएको र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सम्भव भएको ठहर माधव पक्षले गरेको छ भने ओली पक्षले देउवालाई विश्वासको मत दिएर माधव पक्षले गम्भीर राजनीतिक अपराध गरेको भन्दै स्पष्टीकरण नै सोधेको छ । यी तमाम मतभेदहरुका बारेमा एकमत नभएसम्म नेकपा एमाले भित्रको विवाद समाधान हुन सक्दैन ।
माधव पक्षले दुई अध्यक्षको व्यवस्था गर्नु पर्ने र माधव नेपाललाई समान हैसियतमा अधिकार दिएर निर्वाचन आयोगमा समेत हस्ताक्षर चल्ने गरी सबै कुरामा एकमुष्ठ रुपमा सहमति गर्नुपर्ने कुरालाई आफ्नो वटमलाइन बनाएको छ । यदि त्यसो हो भने महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष महासचिव लगायतका अन्य पदाधिकारीहरुको निर्वाचन किन र के का लागि गर्ने त ?
महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका अध्यक्ष लगायतका अन्य पदाधिकारीहरुको पद पनि समाप्त नभइन्जेल उनीहरुलाई पदबाट हटाउन खोज्नु र निर्वाचित पार्टी अध्यक्षसँगै निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई निर्वाचित अध्यक्षकै हैसियतको पदमा राख्नु भनेको निर्वाचित अध्यक्षको अधिकारमाथी ठाडो हस्तक्षेप गर्नु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । यदि त्यस्तोे गर्ने हो भने अन्य पदबाट पराजित भएका व्यक्तिहरुलाई समेत समान पदमा किन नराख्ने भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ । एउटा व्यक्तिको लागि मात्र नियम कानून विधि विधान हुन्छ कि सबैको लागि ?
प्रतिनिधिसभाको विघटन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम माधव नेपालका लागि प्रतिगामी हो भने ओलीका लागि राजनीतिक बाध्यता र अनिवार्य आवश्यकता । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७८ साल वैशाख २७ गते ससदवाट विश्वासको मत लिने दिन माधव पक्ष सांसदहरु उपस्थित नहुनलाई माधव पक्षले ऐतिहासिक र लोकतन्त्रका लागि अनिवार्य कदम भनेको छ भने ओली पक्षले माधव पक्षको यही भूमिकाले गर्दा दोस्रो पटक २०७८ जेष्ठ ८ गते संसद विघटन गर्नु परेको बताउँदै आएको छ ।
तत्कालीन विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफुहरुले गरेको हस्ताक्षर प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनामा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै २०७८ जेष्ठ १० मा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट लोकतन्त्र ,सविधान र राष्ट्रियताको अपराधपूर्णकार्य भन्दै आएको छ । त्यसवाहेक पनि ओली पक्ष र माधव पक्ष बीचमा अर्को मतभेद समेत देखिएको छ । असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसाला र साउन ३ गते प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
यस विवादमा पनि गम्भीर मतभेद रहेको छ । माधव नेपाल पक्षले आफ्नै पहलमा प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएको र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सम्भव भएको ठहर माधव पक्षले गरेको छ भने ओली पक्षले देउवालाई विश्वासको मत दिएर माधव पक्षले गम्भीर राजनीतिक अपराध गरेको भन्दै स्पष्टीकरण नै सोधेको छ । यी तमाम मतभेदहरुका बारेमा एकमत नभएसम्म नेकपा एमाले भित्रको विवाद समाधान हुन सक्दैन ।
यदि टालटुल गरेर विवाद समाधान गर्न खोजिएपनि त्यस्ले राम्रो परिमाण दिन सक्दैन । माधव नेपाल पक्षले अधिकारसहितको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्नु भनेको माधव नेपाल पदका भोका हुन् र थिए भन्न खोज्नु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । यी सबै कारणहरुले गर्दा नेकपा एमाले अहिलेकै अवस्थामा एक हुनु भनेको टालाटुली वटुली कति राम्री पुतली भने जस्तै हो । टालाटुली वटुली कति राम्री पुतली त बनाउन सकिएला तर त्यो कति दिन टिक्ने भन्ने नै हो ।
वरिष्ठ पत्रकार देवेन्द्र चुडाल काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने अभियान साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक तथा प्रकाशक हुन् । बिगत चार दशकदेखि नेपाली पत्रकारिता जगतमा निरन्तर क्रियाशील उनी राजनीतिक, सामाजिक विकृति र विसंगतिका बिरुद्ध तीखो कलम चलाउछन् ।
कांग्रेसले नदेखेको क्षति
क्रान्तिकारी गौरवशाली पार्टीको लफङ्गा नेतृत्व
दमक कांग्रेसको नेतृत्व लिन पर्शुराम रिजाल तयार
गुराँस लघुवित्तद्वारा लाभांश घोषणा